TWR360 | Dr. Luukos
Waxa uu Dr. Luke ka leeyahay xiiqda
Jimicsiga joogta ahi waxa kale oo uu kaa gargaari karaa inuu hoos u dhaco cadaadiska dhiiggaagu, in uu yaraadokolesteroolka nooca nooca xun, aad gubtidkalooriyada, dhistid muruqyada oo uu baruur kaa lunto, iyoin aad . . .
Muxuu Dr. Luukos ka leeyahay cudurka lafaha
Maanta Dr. Luukos wuxuu ka hadli doonaa xiriirka u dhexeeya caafimaadka iyo jimicsiga. Waa maxay cilaaqaadka haddii wax kastoo iyo sidee buu u saameeyan karaa jirkeena? Tani waa muhiim maadaama bulshada manta dadku aysan jimicsi badnayn sidii waagii hore oo kale. Dr. Luukos wuxuu ku bilaabi doonaa isagoo ka sheekeynayo saaxiibkiis, iyo sida ay u jimicsan jireen ama mararka qaar jimicsi la’aan awaadeed. Jimicsiga wuu dhisaa cudurka lafaha.
Dr. Luukos Muxuu ka leeyahay dawaynta cudurka lafaha
Maanta Dr. Luke wuxuu kaala hadli doonaa xiriirka u dhexeeya dawaynta cudurka lafaha, Caafimaadka u dhaxayo iyo Cuntada. Tani waa muhiim sida aan dhammaanteen nahay cunno iyo waxa aan cunno siyaabo kala duwan ayey annaga sameeyan. Dr. Luukos wuxuu bilaabi doonaa isagoo noo sheegaya sheeko ku saabsan qof wuxuu leedahay su'aalo caafimaad iyo cunno. Haweeney 47 sano jir ah oo ku nooleyd miyiga mid ka mid ah gobollada ugu dadka badan. Waxay lahayd laba carruur, mid waa wiil, tan kalena gabadh. Waxay ka shaqeyn jirtay warshad maxalli ah sida ninkeeda kale. Ninkeeda wuxuu aad u jeclaa inuu kariyo cunada. Had iyo jeer way qosli jireen markay sidan dhaheen ka dibna saaxiibbadooda way weydiin lahaayeen . . .
Muxuu Dr. Luukos ka leeyahay cudurka Sabaabka
Dr. Luuk arrimo badan ayuu ka sheegay cudurka sababka isaago firinayo cuduro kale oo lamid ah. Waxaan ka aragnay hadalkii ugu dambeeyay ee ku saabsan cudurka sabaabka inuu yahay cudur aad u adag, oo ah adduunka oo dhan. Marka qof marku cudurka sabaabka qabo ka takhalusi maayo. Hadafku waama daaweynaysid laakiin xakameynta dhibaatooyinka ka imaan kara cudurka. Su’aasha ugu muhiimsan ayaa ah sidee ayaan u xakamayn karnaa dhibaatooyinka ka la xiriira Sonkorowga?
Muxuu Dr. Luukos ka leeyahay neefta
Waa barnaamijkii aad horay inooga barateen ee Dr. Luukos. Markaasa wuxuu fuulay jaranjarada shaqadiisa markii uu si lama filaan ah u bilaabay inuu neefta gaabiyo oo u yeeshay xanuun xabadka ah sida laabta oo kale. Wuxuu guud ahaan fuuli jiray jaranjarooyinka had iyo jeer neef yari awadeed. Si kastaba ha noqotee, maanta aad ayuu uga sii xumaaday weligiisna ma uusan helin gaabin noocaani ah . . .
Muxuu Dr. Luke ka leeyahay Kadi macan iyo Jimicsi
Maanta Dr. Luukos wuxuu nagala hadli doonaa mowduuc muhiim oo ku saabsan dadka oo dhan. Taasi waa kooxaha cuntada aasaasiga ah iyo sida si loo isticmaalo. Qof kasta oo nool wuxuu cunaa maalin kasta, wuxuuna u baahan yahay inuu ogaado sida loo isticmaalo kooxaha cuntada aasaasiga ah si u helo nafaqo ku filan. Dr. Luukos wuxuu ku bilaabi doonaa isticmaalka sheeko ku saabsan hooyo da’a yar.
Lur iyo dhib
Waa wadahadalo taxane ah, oo looga hadlayo fikradaha aasaasiga ah ee caafimaadka. Taasi waa, sidee ayaan ugu noolaan karnaa caafimaad? Kitaabku wax badan buu ka sheegayaa caafimaadka. Xaqiiqdii, qoraaga qayb ka mid ah Axdiga Cusub ee Kitaabka Quduuska ah wuxuu ahaa dhakhtar. Magiciisuna wuxuu ahaa Dr. Luukos.